Owona mboniso ubalaseleyo we-LED yee-aquariums kunye neempawu zazo | Ngeentlanzi
Xa siqala kwihlabathi lee-aquariums kufuneka sithathele ingqalelo ukonga umbane. Inkqubo ye- Imiboniso ekhokelwa yi-aquarium Baye baguqula yonke inkqubo ye-aquariums eqhelekileyo. Bathathe indawo enkulu enkulu yeentlobo ezahlukeneyo zezibane ezisetyenziselwa ii-aquariums ezinjengeetyhubhu ezibengezelayo kunye nee-halides. Esona sizathu siphambili solu tshintsho kukusetyenziswa kwamandla asezantsi okubonelelwa kukukhanya kwe-LED. Oku kwenza ukuba i-aquarium yethu isebenzise amandla ngakumbi kwaye sinokukhanya ngomgangatho ophezulu.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zikrini zibalaseleyo ze-aquariums kwaye zeziphi iimodeli onokuzikhetha ngokuxhomekeke kwiimeko zakho.
1 Owona mboniso mhle we-aquarium ye-aquarium
1.1 Ukukhanya kweLed Aquarium ye-Aquarium yeklasikhi
1.2 Ukukhanya kwe-LED ye-Aquarium ye-NICREW
1.3 ISIBHENO SOKUKHANYA KWI-LED KWI-AQUARIUM 40-50CM
1.4 Inkcazo: DOCEAN 5050SMD
1.5 UkuKhanya kokuKhanya kwe-Aquarium ye-DADYPET
2 Yintoni umboniso we-aquarium ye-aquarium
3 Yenzelwe ntoni
4 Izibonelelo zokusebenzisa ukukhanya kwe-LED kwi-aquarium
5 Uyikhetha njani imiboniso ye-aquarium ye-aquarium
6 Uyifaka njani umboniso we-LED kwi-aquarium
Owona mboniso mhle we-aquarium ye-aquarium
Isibane se-Aquarium LED, Bonisa ...
Ukukhanya kwe-G2 kwe-NICREW ...
I-NICREW YENZA I-RGB + W 24/7 ...
Ukukhanya koMkhukula we-LED ongaphandle
TWINSTAR Ukukhanya 90A W-RGB...
Ukukhanya kweLed Aquarium ye-Aquarium yeklasikhi
Le modeli ineendlela zokukhanya ezi-2. Sine-LED emhlophe kunye ne-LED eluhlaza okwesibhakabhaka. Xa sisebenzisa ukukhanya okuluhlaza ebusuku siyayibona imibala ebengezelayo ekhutshwa zii-coral mollusks. Oku kuyenza ibe ngumhombiso obalaseleyo kwikhaya lethu. Inenkxaso ye-stainless steel efanelekileyo kwitanki leentlanzi malunga ne-53-83 iisentimitha ubude.
Inokonga amandla amakhulu ngokwazisa ukukhanya kwe-LED. Isibane senziwe ngezinto zeplastiki ezingadliyo. Uncedo lwale nto kukuba ayisetyenziselwa ii-aquariums kuphela, kodwa ikwenzela Amaqula, iikati zezilwanyana zasekhaya, amatye amnyama, nakwigumbi lokulala naseofisini.
Inesibane esakhelweyo ngaphakathi ukuze sikwazi ukusibeka naphi na kwi-aquarium. Ungacofa apha ukuthenga le modeli.
Ukukhanya kwe-LED ye-Aquarium ye-NICREW
I-NICREW RGB kunye nokuKhanya kwe-LED ...
Ngalesi sikhanyiso unako ube nemijikelezo yemini nobusuku ngokuzenzekelayo. Ungazilungiselela ukuba zisebenze kuphela xa kukho imfuneko yoko. Ngale ndlela, sinokusebenzisa ukukhanya kwendalo ukukhanyisa izityalo kunye neentlanzi emini nasemva kwemini size sizenze ebusuku. Kungenzeka ngokuchasene namanqanaba ohlukeneyo emibala eyahlukileyo phakathi kobomvu, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Ngale ndlela sinokuyila eyethu imibala kwaye sigcine le mibala yesiko.
Ineendlela ezi-4 ezenziwe ngokwezifiso, ezinokutshintshwa umbala kunye neemodeli zemozulu. Sinokuhlengahlengisa ukukhanya ngokuxhomekeke kubungakanani bokukhanya okufumanayo kwi-aquarium. cofa apha ukuthenga le modeli.
ISIBHENO SOKUKHANYA KWI-LED KWI-AQUARIUM 40-50CM
Isibane se-LED sokuKhanya ...
Umboniso we-aquarium uboniswa yenzelwe ezo ndawo zasemanzini ziphakathi kweesentimitha ezingama-40-50 ubude. Inokusebenza kwamandla kwe-A +++, ke bayasinceda ukugcina amandla amaninzi ngexesha lokusetyenziswa. Ukongeza, inoyilo oluhle kwaye oluncinci olusinceda ukugcina indawo kwi-aquarium. Ungathenga le modeli ngokunqakraza apha ngexabiso elihle.
Inkcazo: DOCEAN 5050SMD
I-JOYHILL ye-LED ye-Aquarium Light, ...
Yenzelwe ezinye iilwandle inde kuba inobude obumalunga neesentimitha ezingama-78. Inemibala emibini yezibane: luhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Inamandla e-9.8W. Umgangatho wokukhanya ulungile kuba uqaqambile kwaye unamandla. Umbala unelungelo lokuzinza ngalo lonke ixesha kwaye ungasetyenziselwa phantsi kwamanzi okanye ngaphandle. Umbane wokuphuma ukhuselekile kuzo zombini iintlanzi nabantu.
Isibane esenziwe ngesibane senziwe ngokucacileyo, i-acrylic enobushushu. Oku kuyenza ukuba ibe nokuqina kwaye kube lula ukuyicoca. Akukho bunzima xa uyisebenzisa kuba kukudibanisa iikomityi ezimbini zokutsala naphina kwi-aquarium. Ingasetyenziselwa kumadama okudada, amachibi okanye i-rockeries. cofa Akukho mveliso ifunyenweyo ukufumana le modeli.
UkuKhanya kokuKhanya kwe-Aquarium ye-DADYPET
I-NO.17 Ukukhanya kwe-Aquarium ye-LED, ...
Yenye yezona ziboniso zibalaseleyo ze-LED kwii-aquariums njengoko inemibala emininzi kunye neemodeli. Ukukhanya kufikelela kwi-24 yeenkozo zokukhanya kombala kunye neemodeli ezi-4 zolawulo olukude ngaphandle kwamacingo. Oku kuyenza ibe sisixhobo esingasetyenziswanga kuphela kwiitanki zentlanzi kodwa nakumaqula, amatye, iihoko zezilwanyana, amadama okudada, njl. Inemibala eyahlukeneyo apho sifumana oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, orenji, mhlophe, luhlaza, njl.
Izinto ezakhiwe ngazo zikumgangatho ophezulu kuba zenziwe ngeplastikhi ene-aluminium alloy kunye neenkxaso zentsimbi engenasici. Ezi zinto zenzelwe ukusebenza okuthembekileyo kunye nokuqina okukhulu. Ngalesi sikrini sokukhanyisa sinokufumana izibonelelo zentlanzi kunye nezityalo. Kungenxa yokuba inani lokukhanya linokuhlengahlengiswa kwaye licwangciselwe ukuba lisetyenziswe ngamaxesha athile emini. Isikrini sinokulungiswa kwi-aquariums ezinobungakanani obahlukeneyo. cofa Akukho mveliso ifunyenweyo ukufumana enye.
Yintoni umboniso we-aquarium ye-aquarium
Kulungiselelwe abo bangaziyo ukuba zeziphi izikrini ze-LED ze-aquariums, kwaye siza kwenza inkcazo emfutshane. Yinto encedisa ukukhanyisa itanki lethu lentlanzi ngomsebenzi omkhulu. Le ntsebenzo ikakhulu ibangelwa Ukulondolozwa kwamandla bayabulela ekusebenzeni kakuhle kwamandla. Itekhnoloji ebonakalise ixabiso elikhulu kwaye inceda ukukhanyisa itanki leentlanzi ngaphandle kokuhambisa ubushushu.
Ezi zikrini zezona zilungileyo ukuze zikwazi ukukhanyisa ii-aquariums zethu. Uvavanyo lubonisa ukuba sisicwangciso esiliqili esingcono sokukhanyisa ii-aquariums zethu kunokukhanya okuqhelekileyo.
Izibonelelo zokusebenzisa ukukhanya kwe-LED kwi-aquarium
Siza kudwelisa ukuba zeziphi izibonelelo zokusebenzisa oku kukhanya kwii-aquariums:
Banokusebenza kakuhle kwamandla, eya kusinceda ukugcina iindleko ekuhambeni kwexesha.
Ukukhanya kwe-LED ayizukuvelisa naluphi na uhlobo lobushushu kwi-aquarium, ke iyakunceda zombini iintlanzi kunye nezityalo.
Kulula kakhulu ukuzisebenzisa nokudibanisa.
Azinasondlo ngaphandle kwaye zinendawo ebanzi yokukhanya ukwenza ngcono itanki lethu leentlanzi.
Uyikhetha njani imiboniso ye-aquarium ye-aquarium
Siza kunika iingcebiso zokwazi ukuba ujonge ntoni xa ukhetha kwiimodeli ezahlukeneyo zentengiso. Ezi zinto zilandelayo kufuneka zithathelwe ingqalelo.
Ubungakanani be-Aquarium: Kuxhomekeke kubukhulu be-aquarium siya kudinga isikrini semilinganiselo eyahlukeneyo. Iilumens yimilinganiselo esetyenziselwa ukulinganisa ubungakanani bokukhanya kwizikrini ze-LED. Uluhlu oluphakathi luphakathi kwe-15-20 ye-lumen kwilitha nganye. Ukwazi imilinganiselo ye-aquarium yethu, sinokubala ukuba loluphi ubungakanani esiza kufuna ukuba isikrini sibe lilo.
Uhlobo lwezityalo: Iindidi zezityalo zasemanzini zikwachaphazela xa ukhetha isibane sokukhanyisa. Ngamnye ufuna ubungakanani bokukhanya ukuze enze ifotosinthesisi.
Ukukhanya kokukhanya kunye nebala: Ezi zinto zimbini zibaluleke kakhulu. Ubuninzi sisixa semithombo ekhanyayo ekhutshwa yiyunithi yexesha. Obu bunzima bulinganiswa ngee-lumens kwaye zezona zibonisiweyo kwizibane ze-aquarium. Umbala bubude bokukhanya.
Imisebenzi kunye nemowudi yolawuloUkwenza intsebenzo engcono eyona nto intle kukuba izikrini ze-LED ze-aquariums ziye zazenzekelayo. Ngale ndlela sinokuthi siziqwalasele ukuba zilingise iishedyuli zemini nobusuku. Ngale ndlela siqinisekisa ukuba i-aquarium yethu inendawo engqongileyo yendalo ngangokunokwenzeka.
Uyifaka njani umboniso we-LED kwi-aquarium
Inkcukacha ebalulekileyo yezobuchwephesha xa ukhetha isikrini se-LED esivumelana nathi ngokulula kwendibano. Kukho iimeko ezithile apho isixhobo kufuneka sidityaniswe sidilizwe ukuze sigcinwe. Oku kwenza ukuba kube lula ukufumana nokususa okanye ukufaka kwi-aquarium. Iimodeli ezineenkqubo zombane ezintsonkothileyo azikhuthazwa. Into elungileyo kukuba abayifuni ubuchwepheshe obuninzi kakhulu ukuba baziqonde kwaye babe nendibano elula.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nezikrini ze-LED zamanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Umboniso we-Aquarium LED